အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကျောက်တောင်ကြီးအတွင်းက ဟိုတယ်..
18 Responses to “ကျောက်တောင်ကြီးအတွင်းက ဟိုတယ်..”
မကြီးရေ တကယ်ကိုကြံကြံဖန်ဖန်ရှာဖွေတင်တတ်ပါရဲ့နော် .
အလည်အပတ်လောက်ဘဲ သွားဖို့ကောင်းတယ်နော်။ အမြဲတမ်းနေထိုင်ဖို့ကတော့ မစဉ်းစားရဲပါဘူး။ ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့။ ဘာမှ စိမ်းစိမ်းစိုစိုလဲ မရှိ။
တစ်ချို့ပုံတွေ မမြင်ရဘူး။ ဘာဖြစ်တယ်မသိ။
မချော က တော့ ရှာဖွေလေ တွေ့ ရှိလေ ပဲ. ထူးထူးဆန်းဆန်း ကျောက် ဂူ ဟိုတယ် တွေ ဆောက် ကြ တယ် နော်... အဲယားကွန်း မလို ဖူးထင်တယ်.. သဘာဝ ကျောက် သား က အေး နေ မှာ. အထဲက အိပ် ယာ တွေ ကြည့်  ရ တာ အိပ်ချင် စရာကောင်းတယ်။
ဗဟုသုတတွေရတယ်.. မချောရေ..း)))
နတ်သမီး မီးခိုးခေါင်းတိုင်တွေက လှလိုက်တာ...၊ သဘာဝ တရားရဲ့ ပန်းပုလက်ရာကတော့ တကယ်ပဲ ရင်သပ်ရှုမောစရာ ကောင်းတယ်နော်၊ ကျောက်ဆောင်ထဲက ဟိုတယ်ကိုကြည့်ရင်း မုံရွာဖက်က ဖိုးဝင်းတောင်တို့၊ ရွှေဘတောင်တို့ကို သတိရသွား သေးတယ်၊ မျှဝေတာ ကျေးဇူး မချော...။
ကြံကြံဖန်ဖန် ရှာလည်းရှာတတ်ပါ့ မမချောကတော့.. :) ဘာပဲပြောပြော မမြင်ဖူး၊ မတွေ့ဖူးတာတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ မြင်တွေ့ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့... ဟိုတယ်ကြီးရဲ့ အပြင်အဆင် အနေအထားတွေအရ ဇိမ်ခံနိုင်တဲ့ လူတန်းစားတွေအတွက်ပဲ ဖြစ်နိုင်မှာပါ.. ကိုယ်တွေကတော့ စိတ်ကူးထဲကပဲ ရောက်ကြည့်ရမှာပဲ..:D
အန်တီတင့်ပြောသလိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် လေးတွေ..မို့ အလည်ပတ်ထွက်ချင်စရာလေး....မမရေ ရှာဖွေ တင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါလို့...
ချောရေ... ကျောက်ဆောင်ကျောင်းတုံးတွေကြားမှာ တရားများသွားထိုင်လိုက်ရရင်တော့ဖြင့်...
ပုံတွေက ထူးခြားဆန်းပြားလိုက်တာ။ ဟိုတယ်အခန်းမှာ အဲကွန်းမလိုပဲ အေးစိမ့်နေမလားလို့ ခံစားမိတယ်။ သဘာဝရဲ့ ထူးခြားလှပမှုတွေက လူတွေ ဖန်တီးလုပ်ယူတာထက် အများကြီး လှပတယ်။ လိုက်မမှီနိုင်ဘူးနော်။
Cappadocia သိပ်လှသလို။ သံတောင်ကြီးလည်း သိပ်လှတယ် အစ်မချော။ သဘာဝ အတိုင်း တောင်တန်းတွေပေါ် တင်နေတဲ့ ကျောက်လုံးကြီးတွေဟာ တစ်ကြီး တွေ ထက်ကြီးပြီး မြက်ခင်းတွေပေါ်မှာ ထည်းထည်း တင်နေကြတယ်။ မိုးတွင်းမှာ တိမ်တွေ ဆိုင်းလို့သိပ်ကို နေဖို့ကောင်းတဲ့နေရာပေါ့ဗျာ။
ကမ္ဘာက သိအောင် ပြချင်လိုက်တာ အမြန်ဆုံး အေးချမ်းကြပါစေသား။ ဒို့ ရွှေပြည်။
ပျားရည်ဆမ်းခရီး အဲ့နေရာထွက်ရင်ကောင်းမလားးP
တကယ်အံသြဖို့ ကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုဘဲ... မချောကတော့ ရှာတတ်ဖွေတတ်တယ်ဗျို့ ... အနီးကပ်ပုံတွေက ပိုကြည့်လို့ ကောင်းတယ်...
သဘာဝတရားက တကယ်ကို အံ့သြစရာ..
အဲဒီထက် အဲဒီအပေါ် လူတွေရဲ့ survive လုပ်သွားတဲ့ အရာတွေက ပိုအံ့သြစရာနော်။